Madaxbanaanida maaliyadeed iyo mushaharsiinta shisheeye maxaa kaaga dhex muuqda? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Madaxbanaanida maaliyadeed iyo mushaharsiinta shisheeye maxaa kaaga dhex muuqda?
Madaxbanaanida maaliyadeed iyo mushaharsiinta shisheeye maxaa kaaga dhex muuqda?
Wadan in uu dal kale oo saaxiibkiis ah ugu deeqo dhaqaale waa wax horey u dhici jirey. Horeyna aynu uga arki jirney dowladaha caalamka dhaqamadooda oo la dhihi jirey dowlad hebla ayaa dowlad kale ugu deeqday dhaqaale dhan intaas.
Sidaas ayeyna ahayd sida keliya ee ku qumanayd is-garabsiga labada dowladood iyo wax isi siintooda. Hase yeeshee dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya taageerada ay siiyaan waxay u muuqataa mid dha-dhan kale leh ama ka duwan dariiqii hore wax la isu marin jirey.
Hadaba, waxaa dhawaan dowlada Emirate-ku heshiis kula saxiixatay magaalada Muqdisho wasaaradda maaliyadda xukuumada Soomaaliya, kaas oo dhigayey in dowlada emirate-ku ay si toos ah mushaharka u siiso ciidamada Soomaaliya. Hadaba arinta la is weydiinayo ee dheeriga ku ah heshiiskan ayaa ah waxa kalifay in dowlada Emirate-ku ay si toos ah mushaharka u siiso ciidamada xooga Soomaaliya, iyadoo aan soo marsiin hay’adaha ku shaqada leh ee dowlada Soomaaliya. Dadka ayaana arintan u sababaynaya siyaabo kala duwan, taas oo qaar u arkaan tun-jileecsi dowladnimo iyo Soomaaliya oo danaheeda ku filaan weydey. halka qaar kalena u arkaan in arintan shaki gelinayso mas’uuliyadda madaxda qarankaka Soomaaliya. Halka kuwo kalena u arkaan qabyada qaranimo ee hay’adaha dowlada Soomaaliya ka muuqata.
Inkasta oo ay sidaas tahay hadana waxaa amaan mudan, dowlada Emirate-ka Carabta oo si aan gabasho lahayn oo geesinimo leh u muujisay in ay garab taagan tahay Soomaaliya iyo xukuumaddeeda. Soomaaliduna ma iloobi doonto marka ay ka taalo cidii gacan siisay. Sidoo kale dowlada Turkiga iyo sida ay Soomaaliya ugu soo gurmatey, ayaan iyadana la hilmaami Karin.
Abwaankii Soomaaliyeed ee Xaaji Aadan Af-qalooc ayaa gabay uu ku tilmaamayey meelaha ugu nugul ee gumaystuhu ka abbaaro ummada in ay kamid tahay marka dhaqaale uu kuu adeegsado waxaana gabaygiisa kujirey:
Istiqlaalka waxa taam ka dhiga waa waa aduunyada e
Mar haduu dhaqaaluhu akhiro calanku iimooye
Kolkaasu amaahdiyo baryada arad ka doontaaye
Icaanadu xornimaday u tahay eebadii melege
Albaabkuu gumaystuhu ka galo umamka weeyaane
Wixii uu ajnabi kuu qabtaa aayatiin malahe
Isku tiirsi baydiin eg iyo ururin xoolaade.
Previous articleFederaalka Maqalnaye Ma La Inoo Fasiray?